काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रू. १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले सो रकम बराबरको बजेट बुधबार नगरसभाको सातौं अधिवेशनमा
बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ बुँदे निर्देशनसहित लकडाउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकका सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मापदण्ड जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र
काठमाडौं। नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा रहेको ढल्केबर सवस्टेशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारका लागि धनुषामा निर्माणाधीन ४०० केभी क्षमताको सो सवस्टेशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्जन गर्यो करिब ३५ करोड
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमाससम्ममा ३४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा १२ करोड १७ लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले २२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको
काठमाडौं । मुलुकभर इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको क्लासिक टेक प्रालिले सेवा विस्तार गरेको १० वर्ष पूरा भएको छ । विश्वकै GPON उत्कृष्ट प्रविधिबाट फाईबर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनी नेपालको ७७ जिल्लामै नेटवर्क बिस्तार गरिसकेको छ। । कम्पनीका २१ ओटा बढी शाखा छन् भने करिब ९०० जनाभन्दा वढी
भोजपुर । असार महीना बित्न लाग्दा भोजपुरमा ५८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र जनाएको छ । यस वर्ष कम वर्षा भएको कारण जिल्लाको कूल धान फल्ने १८ हजार २०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म ५८ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको कार्यालयको भनाइ छ । धानखेती हुने क्षेत्रमध्ये ६० प्रतिशत हेक्टरमा आकाशे पानीको
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्य हृदेश त्रिपाठीले तत्काल उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । ‘अहिले उखु किसानहरु ठूलो मारमा छन् । सरकारको अकर्मण्यता र चिनी मालिकहरुको उदण्डताका कारण उखु किसानहरु ठूलो मारमा परेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल सरकारले ७० प्रतिशत र चिनी मिल सञ्चालकहरुले ३० प्रतिशत
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले पूरक बजेट ल्याउने बेला नभएको बताएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पूरक बजेट ल्याउने विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको र यो पूरक बजेट ल्याउने समय नभएको स्पष्ट पारे । चालू बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा नभएसम्मका लागि
भदौ २९, काठमाडौं । सरकारले नागढुङ्गादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलीखेलसम्म निर्माण हुने मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीका लागि प्रारम्भिक रुपमा ६ कम्पनी छनोट गरेको छ । ती कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावसहित ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिएको छ । प्राविधिक प्रस्तावको आधारमा उपयुक्त
नेपाल ग्याँस प्रा. लिको नपड्किने सिलिण्डर बजारमा
काठमाडौँ / उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले ४०/५० वर्ष पुराना ग्याँस सिलिण्डर अहिले पनि प्रयोगमा रहेको बताए । काठमाडौँमा नेपाल ग्याँस प्राइभेट लिमिटेडले आयोजना गरेको ‘कम्पोजिट सिलिण्डर’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । पुराना सिलिण्डरहरु अहिलेसम्म प्रयोग भईरहनु
काठमाडौ। सुन व्यवसायलाई निर्यातमुखी बनाउन सरकारले सुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई पनि भूमिका दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । काठमाडौँमा सम्पन्न भएको नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको उद्घाटन समारोहमा व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । संघकी अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले नेपालमा सुन व्यवसायीहरुले भोग्नु
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको नेपालको व्यावसायिक चिया खेती सर्वेक्षण रिपोर्ट २०७५ भर्खर सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षणमा हाल १४ जिल्लामा चियाको खेती भईरहेको उल्लेख छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, ईलाम, झापा, मोरङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक,
सनराइज बैंकको सुरक्षित अनलाइन कारोबार
काठमाडौं । सनराइज बैंकले भिसासँग सहकार्य गर्दै भेरिफाइड बाई भिसा(भीबीभी) सेवा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो ग्राहकलाई उच्च सेवा प्रदान गर्ने तथा विद्युतिय भुक्तानीलाई अझ सहज तथा सुरक्षित बनाउने क्रममा उक्त सेवाको शुरुवात गरेको हो । भीबीभी सेवा मार्फत भिसा डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरि
काठमाडौं -सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ
काठमाडौँ ६ वैशाख। सिण्डिकेटविरुद्ध कठोर बन्दै गएको सरकारले यातायात व्यवसायी संघ तथा समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने धम्की दिइरहेका बेला सरकारले यातायातसम्वन्धी समितिहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध
पोखरा ४ वैशाख । पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा जोड दिंदै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सोमबार ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि भनिए पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई समेत आधार हुने गरी यो ल्याइएको हो । बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक
कुल पोष्ट : 60